“HOGGANOOTA QABSOO OROMOO,,,,” -
3 thoughts on ““HOGGANOOTA QABSOO OROMOO,,,,””
Dr. Dagaffaa Abdissa enyuu gowwomsaa jirta laataa? Dhugaa tii namoon akka kee tii qabsoo ummataa Oromo tii qosaa jira. Biyya Eretria deeman uffaata loltuu uffachuun qabsawwa nama hin godhu barii. Atii nama biyya Norway jiratuu miti. Kan goochuun kee qan guuda dha biyya Eretria keessa tii. Akka WBO biyya keessa loluutii offi agarisisuun kee tii KKKKK. Yoo (show off) ta’ee malee kun qabsoo miti.
Abdi, please go and do a better job than Dr. Dagafaa. You cannot bring walabumma by blaming others who are doing at least something positive.
abdi ! yaada kee irraa akkan hubadhetti namuma qabsoo keessa turtee akka tokko tokko ta’uu keeti. kanaaf waa buusuu irra komeen eessaanu nama hin ga’u. sirra warra ati komattu kana wayya. har’allee WBO wabii waldhaansaati. kanaaf adaraa murannoo yoo qabaattee isaan harkaa qabsoo dhaaltee hojjachuuf tattaafadhu. kamachuu fi hamattummaa hin dhaaliin.